နည်းပညာနှင့်သီတင်းရပ်ဝန်း: > ရီစရာလေးများရဲ့စုစည်းတဲ့နေရာလေးပါ1
Reply by Hajee Than Hla Oo ( နဂါး ) on December 30, 2008 at 9:08pm
လွတ်အောင်ပြေး...မိရင်နာမယ်.. ကျွန်တော်ဖတ်ရတဲ့..ဟာသလေးတစ်ခုပါ.... ဒီကအစ်ကိုအစ်မတွေကို ပြန်လည်ဝေမျှလိုက်ပါတယ်... လွတ်အောင်ပြေး..မိရင်နာမယ် ကိုချူချာ တစ်ယောက် အခုတစ်လောအလွန်ဝလာသဖြင့် အလွန်စိတ်ညစ်နေသည်။ စိတ်ညစ်ညစ်နှင့် အိမ်ရှေ့ ဧည့်ခန်းမှာထိုင်ရင်း သတင်းစာကို ယူကြည့်ရာ ကြော်ဋ္ဌာတစ်ခုကို တွေ့ လိုက်ရသည်။ ကြော်ဋ္ဌာက... သင်၏ အဆီများကျဖို့ကျွန်တော်တို့ ကတာဝန်ယူပါသည်။ တစ်ပတ်အတွင်း မည်မျှကျချင်ကြောင်းသာ ဖုန်းနံပါတ်...........သာဆက်သွယ်လိုက်ပါဟု တွေ့ ရသဖြင့် ခေါ်ဆိုကြည့် ရာ တစ်ဖက်မှ...ဟုတ်ကဲ့ Slim Body Group မှကြိုဆိုပါတယ်....မိတ်ဆွေအနေဖြင့်..နေရပ်လိပ်စာနှင့် တစ်ပတ်အတွင်း ပေါင်မည်မျှကျချင်ကြောင်း ပြောပြပါဟုပြန်ဖြေလေသည်။ ထိ်ုအခါ ကိုချူချာ.....တစ်ပတ်အတွင်း ၅ပေါင်ကျချင်ကြောင်းပြောရာ တစ်ဖက်မှ...ဟုတ်ကဲ့ မနက်ဖြန်ကစပြီး လူကြီးမင်းရဲ့ ကိုယ်အလေးချိန် ၅ပေါင်ကျဖို့ တာဝန်ယူကြောင်း...ဤအစီအစဉ်ကို ကြိုက်နှစ်သက်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ကြောင်း ပြန်ဖြေလေသည်။ နောက်နေ့ မနက် အိမ်တံခါးခေါက်၍ သွားဖွင့်ရာ....ငယ်ရွယ်ချောမောလှပသော မိန်းမပျိုလေး တစ်ယောက် အားကစားဝတ်စုံ ၀တ်လျှက် စောင့်နေသည်ကို တွေ့ ရလေသည်။ သူမ၏ လည်ပင်းတွင် ကတ်ပြားတစ်ခုချိတ်ဆွဲထား၍ ဖတ်ကြည့်ရာ..... မိအောင်ဖမ်း..မိရင်နမ်း...ဟုတွေ့ ရသည်။ ထိုမိန်းကလေး က ဘာမှမပြောဘဲ ပြေးထွက်သွားရာ ကိုချူချာလည်း မှီအောင်လိုက်ရတော့သည်။ ၂မိုင်လောက်ပြေးလိုက်မှ ထိုမိန်းကလေးကို မိတော့သည်။ ဒီလိုနှင့် ထိုမိန်းကလေးနောက်ပြေးလိုက်ရာ တစ်ပတ်မျှကြာသော်...အမှန် တစ်ကယ်ပင် ၅ပေါင်ကျသွားကြောင်းတွေ့ ရသည်။ ကိုချူချာတစ်ယောက် အပျော်ကြီးပျော်သွားပြီး ယင်း Group အား ထပ်မံ၍ တစ်ပတ်အတွင်း ၁၀ပေါင်ကျချင်ကြောင်း အကြောင်းပြန်လိုက်သည်။ နောက်နေ့ တွင် ယခင်ကထက် ပိုမိုချောမောလှပသော မိန်းမပျိုလေးတစ်ယောက် ဘောင်းဘီတိုလေးနှင့်စောင့်နေ သည်ကို တွေ့ ရပြန်သည်။ ထိုမိန်းကလေး၏ ကတ်ပြားလေးမှာလဲ...........မိရင်နမ်းပင်ဖြစ်သည်။ ထိုမိန်းကလေးနောက်ပြေးလိုက်ရာ....၅မိုင်လောက်မှမှီလေသည်။ ထုံးစံအတိုင်း တစ်ပတ်ပြည့်၍ ပေါင်ချိန်ကြည့်ရာ တစ်ကယ် ၁၀ပေါင်ကျသွားလေသည်။ ကိုချူချာတစ်ယောက် လောဘတက်လေပြီ။ ၂ ပတ်အတွင်း ပေါင် ၅၀ ကျချင်ကြောင်းအကြောင်းကြားရာ ထို Group က ထိုအစီအစဉ်မှာ လွန်စွာ ပင်ပန်းကြောင်းနှင့် ဖြည်းဖြည်းချင်း ပေါင်ချလျှင်လည်း ရနိုင်ကြောင်းပြောပြသည်။ သို့ သော်ကိုချူချာက ရပါတယ်..ဒီလောက်တော့အပျော့ပေါ့ ဟုပြန်ပြောကာ ၂ ပတ်တွင်ပေါင် ၅၀ ကျရန်သဘောတူလိုက်သည်။ နောက်နေ့ မနက်ရောက်၍ ၀မ်းသာအားရ တံခါးသွားဖွင့်ရာ....တံခါးတွင်...ထောင်ထောင်မောင်း မောင်း သန်သန်မာမာ ယောကျာ်းတစ်ယောက်ကိုတွေ့ ရ၍ အံအားသင့်သွားသည်။ ထိုသူ၏ လည်ပင်းတွင် ချိတ်ဆွဲထားသော ကတ်ပြားလေး၌...... လွတ်အောင်ပြေး...မိရင်နာမယ်..ဟူ၍ဖြစ်လေသတည်း....။
Permalink Reply by Hajee Than Hla Oo ( နဂါး ) on December 30, 2008 at 9:26pm
ပြောချင်လွန်းလို့မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဂျပန်များအုပ်စိုးနေသော ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အချိန်ကာလဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်လာသော ဂျပန်စစ်သားတစ်ဦးသည် မြန်မာစကားအလွန်တတ်ချင်သဖြင့် အမြဲလေ့ လာလျက်ရှိသည်။ နေ့ စဉ် အရပ်သုံးမြန်မာစကားများကို လေ့ လာကျက်မှတ်သည့် အပြင် အိတ်ဆောင်မှတ်စုစာအုပ်လေးဖြင့် လည်း မြန်မာစကားအသံထွက်များကို ဂျပန်လိုရေးမှတ်ထားလေ့ ရှိသည်။ တစ်နေ့ တွင် ထိုဂျပန်စစ်သားသည် စက်ဘီးစီဒလျှက် မြို့ ထဲသို့ ထွက်လာစဉ် လမ်းလျှောက်လာသော မြန်မာတစ်ယောက်ကို မမျှော်လင့် ဘဲ စက်ဘီးနှင့် ဝင်တိုက်မိလေသည်။ အတိုက်ခံရသူမှာ ဘာမှမဖြစ်သော်လည်း ဂျပန်စစ်သားမှာမူ စက်ဘီးရောလူပါလဲကျသွားသည်။ ထိုအခါ လဲနေရာမှ ချက်ချင်းထကာ သူ၏ မှတ်စုစာအုပ်ကို ထုတ်လျှက် စာရွက်များကိုအပြင်းအထန်လှန်နေသည်။ ကိုရွှေမြန်မာမှာမူ သူ့ ကိုရေးမှတ်သွားကာ ဖမ်းဆီးမည် ထင်ပြီး ကြောက်လန့် နေ၏ ။ သို့ သော် ဂျပန်ကမူ သူ၏စာအုပ်ကိုကြည့်၍ အားရပါးရအော်လိုက်သံကို ကြားရသောအခါ ကိုရွှေမြန်မာမှာ ရယ်ချင်စိတ်ကိုမနည်းချုပ်တည်းထားရလေသည်။ ဂျပန်စစ်သားက မြန်မာစကားမပီတပီဖြင့် အော်လိုက်သည်ကတော အောင်မလေးဗျ ဟူသတည်း။
Permalink Reply by Hajee Than Hla Oo ( နဂါး ) on December 30, 2008 at 9:36pm
စဉ်းစားပါဦး သူမ "ငါနိုင်ငံခြားသွားမလို့ " သူငယ်ချင်း " ဘာလုပ်ဖို့ " သူမ " ပိုလှအောင် ခွဲစိတ်ကုသမလို့ " သူငယ်ချင်း " အတော်ကုန်မှာပဲနော်" သူမ " သိန်း၂၀၀ လောက်တော့ ကုန်မှာပေါ့ " သူငယ်ချင်း " နှမြောစရာကြီးဟယ်" သူမ " ကိုယ်ချစ်သူအတွက်ပဲကွာ" သူငယ်ချင်း " စဉ်းစားပါဦးကွာ။ မင်းမှာရှိတဲ့ သ်ိန်း၂၀၀ကုန်သွားရင် မင်းချစ်သူက မင်းကို ချစ်ပါဦးမလား"
Permalink Reply by Hajee Than Hla Oo ( နဂါး ) on December 30, 2008 at 9:37pm
အားလုံးသဘောတူရင် သင်္ဘောတစ်စီးတွင် ရေယာဉ်မှူးအသစ် အပြောင်းအလဲလုပ်ကြသည်။ ရေယာဉ်မှူးအဟောင်းက သင်္ဘော၏ နောက်ကြောင်းရာဇ၀င်ကိုပြောပြီး သင်္ဘောသားများကို ရေယာဉ်မှူးအသစ်နှင့်မိတ်ဆက်ပေးသည် ။ ရေယာဉ်မှူးအသစ် " မင်းတို့ အားလုံးသိအောင် တစ်ခုတော့ ရှင်းရှင်းပြောထားမယ်။ ဒီသင်္ဘောဟာ မင်းတို့ သင်္ဘောလည်းမဟုတ်ဘူး။ ငါ့ သင်္ဘောလည်းမဟုတ်ဘူး။ တို့ အားလုံးရဲ့ သင်္ဘောဖြစ်တယ်ဆိုတာပဲ။" ထိုအခိုက် သင်္ဘောသားများထဲမှ အသံတစ်သံကြားထွက်လာသည်။ " ဟာ အရမ်းကောင်းတာပဲ။ အားလုံးသဘောတူရင် ရောင်းစားလိုက်ကြရအောင်
Permalink Reply by Hajee Than Hla Oo ( နဂါး ) on December 30, 2008 at 9:39pm
ဒေါ်ဒေါ်ပဲဆုံးဖြတ်ပါ ကောင်လေးနဲ့ ကောင်မလေး ပန်းခြံထဲမှာ စကားထိုင်ပြောနေကြတုန်း ကောင်မလေးရဲ့ အမေရောက်လာပြီး … " ကဲပြောစမ်း …။ မင်းငါ့ သမီးကို ဘာတွေပြောနေတာလဲ။ ဖြားယောင်းသွေးဆောင်နေတာမဟုတ်လား" ဒီတော့ ကောင်လေးက " မဟုတ်ရပါဘူးဒေါ်ဒေါ် သူကချည်းပြောနေတာပါ"
Permalink Reply by Hajee Than Hla Oo ( နဂါး ) on December 30, 2008 at 9:41pm
သြော် " သမီးနဲ့ ဈေးဝယ်တောင် အတူတူ မသွားရဲ ပါဘူးရှင်။ သမီးချောချောမွေးမိတဲ့ ဒုက္ခ တော်တို့ သိမှာမဟုတ်ပါဘူး" " သဘာဝပဲလေ ဆီဆက်ပိုင်ရှင်ကြီးရယ်။၀ိုင်းဝိုင်းလည်နေလို့ စိတ်ညစ်နေတာပေါ့ ။" " ၀ိုင်းဝိုင်းလည်နေတာ စိတ်မညစ်ပါဘူးနော်။ လမ်းထောင့် က သူဌေးက ယောက္ခမကြီးလို့ ခေါ်ခေါ်နေတာ စိတ်ညစ်တာ" " သူဌေးကခေါ်တာများ " " အို…သူ့ အသက်က ကျုပ်ထက်သုံးနှစ်ပိုကြီးတယ်တော့ 
Permalink Reply by Hajee Than Hla Oo ( နဂါး ) on December 30, 2008 at 9:42pm
မှန်လိုက်လေ လင်မယားနှစ်ယောက် စကားပြောနေကြရာ မိန်းမ " ရှင်တို့ယောက်ျားတွေက ဒီဘက်နားက၀င် ဟိုဘက်နားကပြန်ထွက်သွားတာပဲ" ယောက်ျား " မင်းတို့ မိန်းမတွေကရော" မိန်မ " ကျုပ်တို့ ကတော့ ဟိုဘက်နားက၀င်တာရော ဒီဘက်နားက ၀င်တာရော ပါးစပ်ကပဲ ပြန်ထုတ်တာ"
Permalink Reply by Hajee Than Hla Oo ( နဂါး ) on December 30, 2008 at 9:43pm
ဒါကို ပိုနှမြောတယ် … ကမ်းပေါ် တတ်ခွင့်ရသဖြင့်သင်္ဘောသားများ မြို့ ထဲလျှောက်လည်ကြသည်။ သတ်မှတ်ချိန်ရောက်သောအခါ သင်္ဘောသားများ အစီအရီ သင်္ဘောဆီ ပြန်လာကြသည်။ အရာရှိက တစ်ယောက်ချင်းစစ်သည်။ သင်္ဘောသားတစ်ယောက်သည် လက်နှစ်ဖက်တွင် ၀ီစကီတစ်ပုလင်းစီ ကိုင်၍ အရာရှိကို ကျော်တတ်၏ ။ အိပ်ထောင့် ထဲ ထည့်ရန် လုံးဝပင် စိတ်မကူးဘဲ ယခုကဲ့ သို့ ဗြောင်ကျလွန်းသည်ကို အရာရှိက လုံးဝသဘောမတွေ့ ပေ။ " ဟေ့ရပ်လိုက်စမ်း " သင်္ဘောသား ရပ်လိုက်သည်။ နောက်မှ လိုက်လာသည့် သင်္ဘောသားများ ၀ိုင်းကြည့်နေရာ ပုလင်းကိုင် သင်္ဘောသားရှက်သွားမည်ဆိုးသဖြင့် အရာရှိက အောက်ပါအတိုင်း အောက်ပါအတိုင်းပြောလိုက်သည်။ " ငါမျက်လုံးနှစ်ဖက်ပိတ်ပြီး တစ်ကနေ သုံးအထိရေမယ်။ အဲ့ ဒီအချိန်အတွင်းမှာ ရေထဲကို ပစ္စည်းကျတဲ့ အသံနှစ်ခုကြားချင်တယ်။ ကိုင်း တစ်၊ နှစ်၊ သုံး " " ဗလွမ်း ၊ ဗလွမ်း " အရာရှိ မျက်လုံးဖွင့်လိုက်သည်။ "အေး ဒီလိုမှပေါ့ ကိုင်း မင်းသွားနိုင်ပြီ " သင်္ဘောသားပြေးတတ်သွားသည် ။ နောက်မှလိုက်ကြည့်နေသော အရာရှိက အံသြတကြီးမေးသည်။ " ဟေ့ဟေ့မင်းခြေထောက်မှာ ဘာလို့ ဖိနပ်မပါရတာတုန်း "
Permalink Reply by Hajee Than Hla Oo ( နဂါး ) on December 30, 2008 at 9:45pm
ငှက်ကလေး တစ်ကောင် ပင်လယ်ကမ်းခြေတွင် ယောင်္ကျား လေး တစ်ယောက် ကိုယ်တုံးလုံး ဖြင်. နေပူစာ လှုံ နေစဉ် သူ.ဆီကောင်မလေး တစ်ယောက် ဦးတည်၍ လျှောက်လာပါတယ်။ ဒါနဲ. သူကလဲ ရှက်တာနဲ. သူ.ပစ္စည်း ကို သူဖတ်နေတဲ. သတင်းစာ နဲ.အုပ်ထားလိုက်ပါတယ်။ ကောင်မလေး - ရှင်.သတင်းစာ အောက်မှာ ဘာရှိလဲဟင်။ ကောင်လေး - ငှက်တကောင်ရှိတယ်။ အဲဒီနောက် ကောင်မလေး ကထွက်ပြေးသွားပြီး ကောင်လေး က အိပ်ပျော်သွားခဲ.တယ်။ ဒါနဲ. ကောင်လေး ကနိုးလာတော. နာကျင်စွာဖြင်. သူဆေးရုံရောက်နေမှန်းသိတော.တယ်။ ဒီတော. သူ.ကို ဆေးရုံခေါ်လာတဲ. ရဲက မေးပါတယ် ။ ရဲ - မင်းဘာဖြစ်လာတာလဲ။ ကောင်လေး - မသိဘူး၊ ကျွန်တော် ပင်လယ်ကမ်းခြေမှာ လဲလျှောင်းနေတုန်း ကောင်မလေး တယောက် က ကျွန်တော. ပစ္စည်းအကြောင်းလာမေးတယ်။ အဲ.နောက်မမှတ်မိတော.ဘူး။ အဲဒီတော. ရဲ က ပင်လယ်ကမ်းခြေ ရှိ ထိုကောင်မလေး ကို သွားရောက်မေးမြန်းပါတော.တယ်။ ရဲ - နင် ဟို ကိုယ်တုံးလုံးနဲ.ကောင်လေး ကို ဘာလုပ်လိုက်တာလဲ။ ကောင်မလေး - အော်သူ.ကိုလား။ ဘာမလုပ်ပါဘူး။ ကျွန်မ က ငှက်ကလေးနဲ.ဆော.နေတုန်း ငှက်က ကျွန်မကို တံတွေးနဲ. ထွေးတယ်လေ။ ဒါနဲ.ကျွန်မလဲ စိတ်တိုပြီး ငှက်ရဲ.လည်ပင်းကို ချိုးပစ်တယ်၊ ငှက်ဥ ကို ခွဲပစ်လိုက်ပြီး အသိုက်ကိုပါ မီးရိူ. ပစ်လိုက်တယ်။
Permalink Reply by Hajee Than Hla Oo ( နဂါး ) on December 30, 2008 at 9:47pm
၂၀၀၉ ခုနှစ် ၁၀ တန်း မြန်မာစာ မေးခွန်းလွှာ ၁။ (က) အောက်ပါမေးခွန်းများကို ဖြေချင်သလိုဖြေပါ။ အင်္ဂလိပ်နာမ်၊ ကုလားဝိသေသန၊ ဂုဏ်ရည်မပြတပြကြိယာ၊ နဖူးဋ္ဌာန်၊ ခြေမကရိုဏ်း။______________ _________________________________________________________________________________________-________________________________________________________________________________________ (ခ)အောက်ပါနာမ်တို့ကို "ကွက်လပ်" တစ်ခုစီ၌ လစ်လျှင်လစ်သလို အသုံးပြုပါ။ နှာဘူးကြီး၊ နင့်ကြီးတော်၊ ဂျီပုန်း၊ မျောက်မျက်နှာ၊ ကောင်မလေး။ ________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (ဂ)အောက်ပါတို့မှ သုံးခုကို ဆရာမအား မေး၍ဖြေပါ။ အနမ်း၊ အချစ်၊ အလွမ်း၊ အမုန်း၊ အပြုံး။_________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ၂။ (က) အောက်ပါဝေါဟာရတို့အနက်မှ ငါးခု၏ အနက်အဓိပ္ပါယ်ကို ဆရာမလစ်မှခိုးချပါ။ အပျိုကြီး၊ ကြက်ငှက်တုပ်ကွေး၊ သူလှတယ်၊ အမုန်းကြီးသူ၊ အကြီးကြီး၊ မနည်းဘူးဟ၊ မခံနိုင်ဘူး။ ___________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (ခ)အောက်ပါတို့မှ ငါးခုကို ၀ါကျတစ်ခုစီ၌ နည်းမျိုးစုံဖြင့် ထည့်လာသော စာရွက်အချို့မှခိုးချပါ။ ကန်တော်ကြီး၊ စုံတွဲ၊ အားရပါးရ၊ အမုန်းဆွဲ၊ မရှက်မကြောက်၊ အလွမ်းပြေ၊ အိမ်ကိုပြန်ခဲ့တော့။ __________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (ဂ)အောက်ပါအလင်္ကာတို့အနက်မှ ငါးခု ကို သက်ဆိုင်ရာ သင်ခန်းစာများတွင် မည်သို့သုံးထားကြောင်း နှင့် အဘယ်ကြောင့် ထိုအလင်္ကာမြောက်ကြောင်း မိတ္တူဆိုင်မှ ချုံ့လာသော စာရွက်ဖြင့် ကူးဖြေပါ။ ဘူ……ဘွတ် (မြည်သံစွဲ)၊ ပုရွက်ဆိတ်ခေါင်းလောက် (အတိဿယ)၊ ဆင်နင်းမြင်းကန် (ရူပက)၊ လင်းတထိုင်သကဲ့သို့ (ဥပမာ)၊ အခြောက်တို့မာယာ (ရူးမတတ်)၊ ပိုးပြောင်ကြီးပုဆိုး ပေါက်သကဲ့သို့ (ဥပမာ)။ __________________ ________________________________________________________________________________________ ____________________________________________-___________________________________________ ၃။ (က) အောက်ပါတို့အနက်မှ ငါးခုကို ဖြေချင်ဖြေ မဖြေချင် အိပ်နေပါ။ (၁) "ငါ့သမီး …… စာကျက်နေတယ်" ကဗျာကို မည်သူရေးသနည်း။ (၂) "ဟို… အတုံး၊ ထိန်ထိန်ဝါ" ဟူသည် အဘယ်နည်း။ (၃) နာနတ်သီး ကဗျာမှ ဆရာမ၏ "တင်" ပြပုံကို ဖော်ပြပါ။ (၄)ရှင်မဟာကောင်းမြတ်သည် ဆရာမအား မည်သည့်ဂါထာ ချီးမြှင့်သနည်း။ (၅)"ငါ့ရုပ်သည် သာချော၏" ကဗျာမှ ဆရာဇော်ဂျီ၏ ကိုယ်နေဟန်ထား ပျော့ပြောင်းပုံကို ဖော်ပြပါ။ (၆) "သူသာလျှင် အသားအမည်းဆုံး" ကဗျာကို မည်သူရေးသနည်း။ (၇) "တံခါးစောင့် ဗူးလောက်ရှည်၊ ငါ့မှာတော့ လွမ်းလောက်လေ" စာသား၏ အဓိပ္ပါယ်ကို ရေးပါ။ (၈) "ငါ့ရဲ့အချစ် …… ယူပါဦးလား" ကဗျာမှ ကဗျာဆရာကြီး ကောင်းမြတ်၏ ခံစားချက်ကိုရေးပါ။____________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________-_________ ၄။ (က) အောက်ပါတို့အနက်မှ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ တစ်ပုဒ်ကိုရွှီးပါ။ "အမေပြောတော့ ငယ်သေးတယ်၊ ရေချိုးမှသိကွယ်" ကဗျာ၏ အဓိပ္ပါယ်ကှို စာစစ်အဖွဲ့ အကြိုက်တွေ့အောင် ဖြီးဖြန်းရေးသားပါ။ (သို့) "ရင်ထဲမှာ ဘာညာဘာညာ" ကဗျာမှ ခံစားရသော ရသကို ရေးပါ။ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (ခ) အောက်ပါတို့မှ ငါးခု ကို အနောက်သို့လှည့်ကြည့်ပြီး ခိုးချပါ။ (၁) မင်းတုန်းမင်း၏ (၆၆) ယောက်မြောက် သားတော်၏အမည် ကို ဖော်ပြပါ။ (၂) မိဖုရားဖွားစော နောက်ဆုံးယူလိုသော ယောက်ျား၏ အမည်ကို ဖော်ပြပါ။ (၃) "မောင့်ဘ၀…..လင်းတနား" ဟူသည် အဘယ်နည်း။ (၄) စီးချင်းတိုက်ပွဲတွင် လောက်လေးဂွ ကိုင်သော သူရဲကောင်း၏အမည်ကို ဖော်ပြပါ။ (၅) သီပေါမင်း၌ ဖွန်ကြောင်နည်း မည်မျှရှိသနည်း။ (၆) "ပညာသင်ခါ ဘောင်းဘီမပါ" ကိုမည်သူရေးသနည်း။ (၇) ကောသလမင်းကြီး၏ နှစ်လုံးအတိတ်ပေးသော အိပ်မက်တစ်ခုကိုဖော်ပြပါ။_________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (ဂ) အောက်ပါတို့အနက်မှ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ တစ်ပုဒ်ကို ဖြီးပါ။ သိင်္ဃသူ့သမီးကျောက်စာမှ သိင်္ဃသူ့သမီး၏ အကြွားကြီးပုံ၊ လေလုံးထွားပုံ၊ သူ့ကိုယ်သူ သက်မွန်မြင့်နှင့်တူပုံ၊ ရဲလေးအား အသေရရ အရှင်ရရ လိုချင်ပုံတို့ကို အစီအစဉ်တကျ ရှင်းပြပါ။ (သို့) "လင်မယားရန်ပွဲ" မှ လင်မယားနှစ်ဦး၏ ဂုဏ်ရည်ကို ပေါ်လွင်အောင် ရေးသားပါ။_______________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ၅။ (က) စကားစပ်နှင့်တကွ ရှင်းပြပါ။ __________ ဘီးတစ်လက်၊ အညည်း တစ်ချက်မညူး၊ အပြီးသတ်အောင်ရှာမယ်ဟဲ့…"သန်း"၊ အချိန်မတော်၊ ကြည့်တော့နေမြင့်ပြီမို့ အိမ်ပြန်ဖို့လမ်း၊ ခြေတော်လှမ်း…ဒီနေ့ဖို့ကာ၊ ၀င်ကြေးသုံးရာတန်ပြီတကား။ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (ခ) အောက်ပါတို့မှ နှစ်သက်ရာတစ်ပုဒ်ကို စာစီကုံးပါ။ ကန်တော်ကြီးမှ စုံတွဲများ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ချစ်ကြည်နူးကြပုံ။ (သို့) "သန်း" ရှာနေသော စုံတွဲနှစ်ယောက် အပြန်အလှန် အတင်းပြောကြပုံတို့ကို စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြေဆိုပါ။ ____________________- ______________________________________________________________________________________________________________-__________________________________________________________-________
Permalink Reply by Hajee Than Hla Oo ( နဂါး ) on December 30, 2008 at 9:49pm
အံဝင်ခွင်ကျ..... ဟစ်တလာအာဏာရလာပြီးနောက်.....ဂျူးလူမျိုးများကိုသတ်ဖြတ်စဉ်က....ရွာတစ်ရွာတွင် အဘွားအိုတစ်ယောက်သည် ဟစ်တလာကိုမုန်းတီးကာ နေ့ တိုင်း ဟစ်တလာသေပါစေဟု ဆဲဆိုမြည်တမ်းရာ သူမမွေးထားသော ကြက်တူရွေးကလည်း နေ့ တိုင်း ဟစ်တလာသေပါစေဟု အော်နေတော့သည်။ တစ်ရက်တွင် ဟစ်တလာ၏တပ်များရွာကို ရောက်လာကာစစ်သားတချို့ ကင်းလှည့်စဉ် ထို အဘွားအို၏ ကြက်တူရွေးက ဟစ်တလာသေပါစေဟု အော်နေသဖြင့် စစ်သားများဒေါပွကာ အဘွားအိုအား... အဘွားကြီး..ခင်ဗျား ကြက်တူရွေးနောက်တစ်နေ့ ဒီလိုအော်ရင် သတ်ပစ်မယ်ဟုကြိမ်းမောင်းကြလေသည်။ အဘွားအိုက...တိရစ္ဆာန်မို့ မသိလို့ အော်တာပါ....နောက်ဒီလိုမဖြစ်စေရပါဘူးဆိုတော့မှ...ပြန်သွားကြသည်။ နောက်နေ့ စစ်သားများလာသောအခါ ကြက်တူရွေးက ဟစ်တလာသေပါစေဟုအော်ပြန်သည်။ စစ်သားများက အဘွားကြီး နောက်နေ့ မှာ ခင်ဗျား ကြက်တူရွေး ထပ်အော်ရင် ကြက်တူရွေးရော ခင်ဗျားပါသတ်ပစ်မယ်ဟု ခြိမ်းခြောက်သွားလေသည်။ အဘွားအိုလည်းစိတ်ညစ်ကာ ကြံရာမရတဲ့အဆုံး ရွာရှိ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်ထံ လျှောက်ထားရာ.. ဆရာတော်က...ဒါများဒကာမကြီးရယ် ဘုန်းဘုန်းဆီမှာ ကြက်တူရွေးတစ်ကောင်ရှိတယ်....ဒီကောင်က အရမ်းအေးတာ..ဘာမှမပြောဘူး..ဒီကောင်နဲ့ ဒကာမကြီးကြက်တူရွေး ခဏလဲထားလိုက်ပေါ့ဟုဆိုကာ အကောင်ချင်းလဲလိုက်ကြသည်။ နောက်နေ့ စစ်သားများရောက်လာသောအခါ ဆရာတော်၏ ကြက်တူရွေးက ဘာမှမပြောဘဲ ငြိမ်နေသဖြင့်... စစ်သားတစ်ယောက်က ဟေ့ကောင်ကြီး ငြိမ်လှချည်လား..လုပ်ပါအုံးလား....ဘာတဲ့ ဟစ်တလာသေပါစေလေ ကြက်တူရွေးက ဘာမှမပြောဘဲနေရာ စစ်သားက ဟေ့ ဟစ်တလာသေပါစေ..ဟစ်တလာသေပါစေ...ဟုမခံချင်အောင်ပြောရာ..ထိုအခါမှဆရာတော်ကြက်တူရွေးက အောင်မြင်သောအသံဖြင့်.... ....တောင်းတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ပါစေ ချစ်သား...ဟုတခွန်းတည်းပြောလိုက်တော့သည်။
Permalink Reply by Hajee Than Hla Oo ( နဂါး ) on December 30, 2008 at 9:51pm
အကြံကောင်း ဖခင်။ ။ သားရေ.. အဖေ မင်းကို မိန်းမပေးစားမလို့ စီစဉ်နေတယ်ကွ။ သား။ ။ ကျုပ်က ကိုယ့်ကြိုက်တဲ့လူပဲ ကိုယ်ယူမှာ ဗျ။ ဖခင်။ ။ နေအုံး သား… ကောင်မလေး က ဘီလ်ဂိတ် သမီးကွ။ သား။ ။ အော် ဒီလိုလား… အဖေ့ စကားနားထောင်လိုက်ပါမယ်။ ထို့နောက် ဖခင် သည် ဘီလ်ဂိတ် ထံသို့သွား ပြီး…. ဖခင်။ ။ ခင်ဗျား သမီးအတွက် အင်မတန်သင့်တော်တဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်တွေ့ထားတယ်။ ဘီလ်ဂိတ်။ ။ ကျွန်တော့် သမီးလေး က ငယ်ပါသေးတယ်ဗျာ။ ဖခင်။ ။ နေအုံး… ဟိုကောင်လေး က ကမ္ဘာ့ဘဏ် လက်ထောက် ဥက္ကဌ ဗျ။ ဘီလ်ဂိတ်။ ။ အာ.. ဒီလိုဆိုတော့လဲ လက်ခံရမှာ ပေါ့ဗျာ။ နောက်ဆုံးတွင် ဖခင်သည် ကမ္ဘာ့ဘဏ် ဥက္ကဌ ထံသို့သွားသည်။ ဖခင်။ ။ ဥက္ကဌ ကြီးခင်ဗျား… လစ်လပ်နေတဲ့ လက်ထောက်ဥက္ကဌ ရာထူးအတွက် အထူးသင့်တော်တဲ့ သူငယ်လေးတစ်ယောက် တွေ့ထားပါတယ်။ ဥက္ကဌ။ ။ကျွန်တော်မှာ လိုအပ်တာထက် အဲဒီရာထူးအတွက် လိုအပ်တာထက်တောင် ပိုများနေပါတယ်။ ဖခင်။ ။ နေအုံး.. ဒီသူငယ်လေးက ဘီလ်ဂိတ်ရဲ့ သားမက်ကလေးဗျ။ ဥက္ကဌ။ ။ ဒီလိုလား… ရပါတယ်။
Posted by Hajee Than Hla Oo at 11:03 AM